ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको आईपीओ कहिले हुन्छ निष्कासन ? | खुल्लापाना
ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको आईपीओ कहिले हुन्छ निष्कासन ?
खुल्ला पाना २०७७ माघ ११, आईतबार (१ साल अघि) १६ पटक पढिएको
ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले माघ २३ गतेदेखि सर्वसाधारणमा प्राथमिक शेयर(आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको हो ।
कम्पनीले १८ लाख कित्ता तथा स्थानिय बासिन्दाका लागि जारी शेयरमा बिक्री नभएको १६ लाख ८६ हजार ४०० कित्ता गरी कुल ३४ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
सो शेयर खरिदका लागि माघ २७ गतेसम्ममा आवेदन दिनुपर्नेछ । सो अवधिसम्ममा पूर्ण आवेदन नपरेमा फागुन ७ गतेसम्म म्याद थप गरिनेछ । सो आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङ्गमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी बी प्लस (आइएस) रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले वित्तयि दायित्व पूरा गर्न उच्च जोखिममा रहेको आधार जनाउँदछ ।
कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावर